I-Semalt Expert: Ungakukhusela njani ukuThatyelwa koGawulayo okonakalisa i-Data Analytics Referral Data
Ngamanye amaxesha, iwebhusayithi yakho inokufumana ukuthunyelwa kweendlela. Kule meko, le ntengiso ingabangela imiphumo emibi kwi data yakho ye-analytics. Yonke i-webmaster idinga idatha echanileyo kunye nechanileyo yeenjongo zokuthengisa nge-e-commerce. Iimpawu ze-Spamots kunye neminye imithombo yokunikezela ngokuthumela ugaxekile ingaba nolwazi oluninzi kwi-data yogaxekile. Kule meko, abasebenzisi banokufumana ulwazi olungachanekanga malunga nenkqubela ye-e-commerce field - europe cheap vps. Ukususa i-fake ye-traffic kwi-data yakho, unokufuna ukufunda indlela yokuvimba ukugalelwa kogaxekile kwi-data yakho ye-Analytics.
Kule nqaku, uJack Miller, ilungu labasebenzi bezakhono Semalt IiNkonzo zeDivarti, inikeza amacebo amaninzi angakunceda ukubuyisela indlela efanelekileyo:
Kwiimeko ezininzi, izithuthi ezivela kummandla zizama ukufihla amagama. I-Traffic Traffic ivela kumaphepha angama-19 . I-arhente ye-SEO e-BlackO ethembisa isiphumo esheshayo esincinci ithambekele ukuba ininzi yale mithombo yendlela. Iimpawu eziphambili ze-botnet ziquka ezininzi zamagama eziqhubekileyo ezihamba ngephepha eliphonyayo kwi-website yakho. Kwiimeko ezininzi, olu lwazi luphazamisa indlela abantu abaninzi abambisana ngayo nale portal. Ukusetyenziswa kwabanikezeli be-imeyile abangaphephile kwandisa umngcipheko wokufumana lolu hlobo lwezithuthi.
Umsebenzisi we-intanethi enobungozi unokukwazi ukufumana i-ID yakho ye-Google Analytics yepropati..Ukusebenzisa i-ID yakho yepropati, unako ukwandisa okanye ukunciphisa nawaphi na amatheriyithriba nje ngokuba bayazi ukuba zeziphi izinto ze-Google Analytics ezihlelayo. Yonke inguqu yeGoogle Analytics ixhomekeke kulolu hlobo lokuvakasha kwewebhu. Kwezinye iimeko, abanye ababoneleli nge-imeyli bathambekele ekufumaneni i-imeyile evela kwizizinda zogaxekile. Kubalulekile ukusebenzisa umnikezeli we-imeyile okhuselekileyo kwiindawo ezininzi.
njani ukunqanda ugaxekile wokuthumela
Unokuthintela izizinda zabo zogaxekile usebenzisa ifayile ye .htaccess kwiingcambu zesizinda sakho. Abasebenzisi abasebenzisa iseva ye-Apache banokukhetha ukusebenzisa iikhowudi eziliqela kwiiwebhusayithi zabo. Kubalulekile ukunyamekela xa usebenzisa ezi nkqubo kwiwebhusayithi yakho. Ezinye zee khowudi zinokukwazi ukudonsa yonke indawo kwi-server. Ngaphezu koko, kunokukhokelela ekungciphekweni komngcipheko wokuthunyelwa kogaxekile.
Ungasebenzisa kwakhona izihlungi ze-Google Analytics spam. Uninzi lwe-webmaster unayo i-akhawunti ye-Google Analytics ukubanceda kwimisebenzi ye-analytics yewebhusayithi. Kwiphepha lomlawuli, unokubamba isithuthi esivela kwi-domain ethile oyikhethayo. Unako ukongeza izihlungi zenkcubeko ozikhethile. Ezi zihlungi zinokubamba iimitha zamatriki ezivela kwimimandla egaxekile. Unokucoca kwakhona iitrato ngekheli le-IP. Ukusetyenziswa kwekiki kunye neminye imiba kunokwandisa ukhuseleko kwiwebhusayithi yakho.
Ugaxekile logalelo lungaba ngumsebenzi onzima kumjongene neenkqubo ezininzi ze-e-commerce. Ngokomzekelo, abantu abasebenzisa i-intanethi ye-website banokuhlangabezana ne-spam eninzi kunye namanye amashishini ahlukeneyo. Ukufunda ukuvimba ukuthunyelwa kwezithuthi kunokuba nzima. Esi sikhokelo sinokukunceda ngeengcebiso malunga nokuthintela ukuthintelwa kogaxekile ekuphazamiseni ulwazi lwakho lwewebhusayithi. Ukongezelela, unokwazi ukucoca ibhobho ekwenzeni ukutyelela kwi-intanethi kwi-domain yakho.